बुटवल, १६ मंसिर – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लुम्बिनीमा आयोजित त्रियान सम्मेलनमा सहभागी हुन आज लुम्बिनी आउँदै छिन् । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको आयोजनामा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा प्रथम त्रियान प्रज्ञा सम्मेलन सुरु भएको हो । सम्मेलनको मुख्य समारोहको उदघाटन गर्न राष्ट्रपति भण्डारी लुम्बिनी आउन लागेकी हुन् ।
विश्वविद्यालयले बौद्ध संस्कृति र समृद्धि तथा बौद्ध शिक्षण पद्धतिमा केन्द्रित रहेर त्रियान सम्मेलन आयोजना गरेको हो ।
लुम्बिनीमा आयोजित त्रियान सम्मेलनमा नेपालका बौद्ध विद्धान तथा अनुसन्धानकर्ताहरुको सहभागी छन् । सम्मेलनको पहिलो दिन बौद्ध संस्कृति र समृद्धिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका छन् । थेरबाद बौद्ध संस्कृति र समृद्धि विषयमा अनागारिका प्रितिवती र मदनरत्न बज मानन्धरले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा थेरवादी संस्कृतिलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्न सकिने भन्दै थेरवादी परसम्पराको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा त्रिरत्न मानन्धरको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका कार्यपत्रमाथि भिक्षु वजिर र डा. रिना तुलाधरले टिप्पणी गरेका छन् ।
त्यस्तै थेरबाद बौद्ध शिक्षण पद्धति विषयमाथि प्रा.डा. भिक्षु सांकिच्च महास्थविरले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस कार्यपत्रमाथि इश्वरचन्द्र विद्यासागर श्रेष्ठले टिप्पणी गरेका थिए । त्यस्तै महायान बौद्ध संस्कृति र समृद्धि विषयमा आचार्य सार्की शेर्पाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सो कार्यपत्रमाथि डा. शारदा पौडेलले टिप्पणी गरेकी थिइन् । सोही विषयमा प्रा.डा. रमेश ढुंगेल, लोपेन कर्मा यान्चेनले पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हृदयरत्न बज्राचार्यको अध्यक्षतामा चलेको दोस्रो सत्रमा प्रस्तुत दुई कार्यपत्रमाथि वेदराज ज्ञवाली र डा. निमा शेर्पाले टिप्पणी गरेका थिए ।
त्यस्तै महायान बौद्ध शिक्षण पद्धति विषयमा डा. तेन्जिङ जिन्पा भूतियाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमाथि प्रा.डा. बिजय वरुवाले टिप्पणी गरेका थिए । त्यस्तै बज्रयान संस्कृति र समृद्धि विषयमा बिहीबार गोष्ठी हुँदैछ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति हृदयरत्न बज्राचार्यले विश्वविद्यालयले बौद्ध संस्कृतिलाई समृद्धिसँग जोड्ने योजनासहित यो सम्मेलनको आयोजना गरिएको बताए । त्यस्तै रजिष्ट्रार डा. तिलकराम आचार्यले बौद्ध संस्कृतिलाई समृद्धिसँग जोड्ने नीतिलाई यो सम्मेलनले टेवा पुर्‍याउने बताए ।